Somaliland oo albaabada u furtay maalgashiga shisheeye - Halbeeg News
Somaliland oo albaabada u furtay maalgashiga shisheeye
NAIROBI(HALBEEG)-Madasha maalgashi ee Somaliland oo looga gol lahaa soo bandhiggida fursadaha maalgashi ee ay ka faaideysan karaan maalqabeennada shisheeye ayaa lagu soo gaba gabeeyay Nairobi, madasha ayaa ku baaqday sare u qaadidda maalgashiga shisheeye.
Saraakiil sar sare oo ka tirsan maamulka Somaliland, ganacsato iyo maalgashadayaal ka kala socday dalalka Bariga Afrika ayaa ka qeyb galay shirka ee uu soo qaban qaabiyay xafiiska xiriirka Somaliland ee Nairobi .
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Yaasiin Maxamed Xiir ayaa sheegay inkastoo dalkiisa uusan weli helin aqoonsi caalami ah uu haddana albaabada u furayo dhammaan maalgashiga shisheeye.
“Somaliland iyo wadamada kale ee dhaca Bariga Afrika siiba Kenya wax badan ayay wadaagaan. Waxaa naga dhaxeeya xiriir taariikhi ah kaasoo u baahan in xoojiyo si loo awood siiyo dadkeenna iyada oo loo marayo ganacsi iyo maalgashi” ayuu yiri Wasiir Xiir.
Wasiirka ayaa ku casuumay maalgashadayaasha shisheeye in si fiican ay uga faa’iideystaan fursadaha maalgashi ee Somaliland.
“ Soo dhawaada, waxaa tihiin walaalahaya, nagala qeyb qaata dhismaha Somaliland idinka oo adeegsanaya dhaqaalihiinna iyo maalgashigiinna” waxuu intaa ku daray “ Waxaan rabnaa in aan ka shaqeyno ballarinta isu socodka ganacsi iyo midka maalgashi ee u dhexeeya labada dhinac”
Wasiirka ayaa sheegay in tiro badan oo kamid dadka Kenyaanka ah eek u nool Somaliland ay uga dhex shaqeystaan si wanaagsan taasina ay tilmaan u tahay sida Somaliland ay ugu heellantahay soo dhaweeynta cid walba oo wax ku soo kordhin karta sara u qaadidda dhaqaalaha Somaliland.
Isu duwaha xafiiska xiriirka Somaliland ee Kenya, mudane Baashe Cumar oo madasha ka hadlay ayaa Kenya ugu baaqay in ay ka faa’iideystaan kheyraadka faraha badan ee dhex ceegaaga Somaliland.
Wafdigii Jabdadda ONLF oo ku wajahan Jigjiga